I-Lazaro Cardenas, Umbhali e-NJ & NY kwiarhente yeZindlu, eqala, uKhuselo lweNqanawa kunye namaGqwetha asebambisayo
ikhaya / Lazaro Cardenas
Yintoni intshukumo elindelekileyo yokufika komntwana? Kwaye, ndiyakulungele?
Matshi 21, 2016 I-New Jersey ImmigrationUshiye uluvoLazaro Cardenas
Yintoni intshukumo elindelekileyo yokuBufika kwabaNtwana eNew Jersey? Kwaye, ndiyakulungele?
NgoJuni we-2012, ulawulo lwe-Obama lwenze iyeza elitsha kubafuduki abancinci e-US ngaphandle komthetho. Uyabizwa Ityelwe ...